မြန်မာ.တပ်မတော် - မှတ်စုစာအုပ်
မြန်မာ.တပ်မတော် သည် မြန်မာနိူင်ငံ ၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု အဖြစ် ရပ်တည်ခဲ.သည်။မြန်မာ.တပ်မတော် ဟာ အရှေ.တောင်အာရှ နိူင်ငံမှာ ဗီယက်နာမ်တပ်မတော် ပြီးရင် ဒုတိယ အကြီးဆုံး အဖြစ် ရပ်တည်ခဲ.ပါတယ်။မြန်မာ.တပ်မတော်မှာတပ်မတော် သားပေါင်း ၄သိန်း ကိုးသောင်း နှစ်ထောင်ရှိပါတယ်။မြန်မာ.တပ်မတော်ဟာ စစ်ထိုးခြင်း ကို ကျွမ်းကျင်ပိုင် နိူင်ပြီး ကြမ်းတမ်းတဲ.မြေ အနေအထားတွေမှာ လည်း စစ်တိုက်နိူင်အောင် လေ.ကျင်.ပေးထားပါတယ်။မြန်မာ.တပ်မတော် ကို ၁၉၄၈ မတိုင်ခင်က ဖွဲ.စည်းခဲ.ပြီးတော.မြန်မာ.တပ်မတော်ကို အုပ်ချုပ်သူကတော. ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မောင်အေး နှင်.ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေ တို.ဘဲဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာ.တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဘတ်ဂျက် ကတော. အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၇.၀၇ ) ဘီလီယံ ဖြစ်ပါတယ်။
၂၀၁၀ ခုနှစ်မှာ ရွှေးကောက်ပွဲကိုကျင်းပပေးခဲ.ပြီး ၂၀၁၁ မှာ စစ်မှုမထမ်းမနေရ ဥပဒေကို ပြဌန်းမယ်လို. သတင်းဌာနတွေကဖော်ပြခဲ.ပါတယ်။
မြန်မာ.တပ်မတော် ၏ ဖွဲ.စည်းပုံ
၁၉၉၄ ခု အောက်တိုဘာ ၁၈ ရက်တွင် နည်းဗျူဟာ လေ့လာရေး ဌာနကြီး (The Office of Strategic Studies) နှင့် စစ်ထောက်လှမ်းရေး (Defence Service Intelligence) ကို ဗိုလ်ချုပ်ကြီးခင်ညွန့် အား ပယ်ထုတ်စဉ်မှစ၍ ပယ်ဖျက်ခဲ့သည်။ နည်းဗျူဟာ လေ့လာရေး ဌာနကြီးမှ တပ်ရင်း လေးရင်း ကို ရန်ကုန် စစ်ထောက်လှမ်းရေး အား ထိန်းသိမ်းရန် ညွန်ကြားခဲ့သည်။ တချိန်တည်းမှာပင် အခြား စစ်ထောက်လှမ်းရေးများကိုလည်း ထိန်းသိမ်းခဲ့သည်။ စစ်ထောက်လှမ်းရေး တပ်ဖွဲဝင် သုံးပုံ နှစ်ပုံခန့် ကို နှစ်ရှည် ထိန်းသိမ်းခဲ့သည်။
၂၀၀၆ နှစ်ဦးပိုင်းတွင် တိုင်းမှူး အသစ်များဖြင့် တပ်မတော် ကို ပြန်လည် ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး စစ်ဌာနချူပ် ကို နေပြည်တော် တိုင်း သို့ ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ဦးဆောင်တဲ့ သူရဲကောင်းအာဇာနည် ရဲဘော်သုံးကျိပ်တို့ဟာ (၁၉၄၁) ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ (၂၆)ရက်နေ့မှာ ထိုင်းနိုင်ငံ ဘန်ကောက်မြို့တွင် ဗမာ့လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော်(BIA) ကို စတင်စုဖွဲ့ တည်ထောင် ခဲ့ရာမှ ဗမာ့ ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် (BDA) ဗမာ့အမျိုးသားတပ်မတော် (BNA) ဗြိတိသျှနယ်ချဲ့တို့ အခေါ်အဝေါ်အရ မျိုးချစ်တပ်မတော် (PBF) ရယ်လို့ တစတစ ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ ၎င်းတပ်မတော်သုံးရပ်ရဲ့ ဦးစီးခေါင်းဆောင် စစ်သေနာပတိဟာ တပ်မတော်ရဲ့ မူလ ပထမ ဖခင်အစစ် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းသာ ဖြစ်ခဲ့ ပါသည်။
သမိုင်းအစဉ်အလာအရ ဖခင်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းပြီးလျှင် ရဲဘော်သုံးကျိပ်ဝင် စစ်ခေါင်းဆောင်တို့ရဲ့ ၀ါစဉ်ဟာ ဗိုလ်လင်္ကျာ၊ ဗိုလ်စင်္ကြာ၊ ဗိုလ်ဇေယျ၊ ဗိုလ်နေ၀င်း စသည်ဖြင့် ရှိခဲ့သည်။ (၁၉၄၅) ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ(၇)ရက်နေ့မှာ ကန္ဒီစာချုပ်အရ အမြဲတမ်း တပ်မတော်အဖြစ် ပြင်ဆင် စုဖွဲ့ခဲ့ရာမှာတော့ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းက တပ်မတော်မှ ထွက်ပြီး နိုင်ငံရေးလောကသို့ ကူးပြောင်းသွားခဲ့ပါသည်။ ရဲဘော်သုံးကျိပ်ဝင် သူရဲကောင်း (၆) ဦးသာ အမြဲတမ်း တပ်မတော်မှာ စစ်မှုဆက်ထမ်း ခဲ့ကြသည်။သခင်ထွန်းအုပ်ရဲ့ မေတ္တာရပ်ခံချက်အရ ဗိုလ်နေ၀င်းဟာ အမြဲတမ်းဗမာ့တပ်မတော်မှာ ဗိုလ်လင်္ကျာပြီးလျှင် နံပါတ်(၂)နေရာမှာ ရခဲ့ပြီး ဗိုလ်ဇေယျက နံပါတ် (၃) နေရာရခဲ့သည်။
(၃) ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် Commander in Chief (Army)
တပ်သား တဦးလျှင် ၀င်ဝင်ခြင်း ကျပ် ၁၆၀၀၀ ဟု သတ်မှတ်ထားပြီး ၂ နှစ်လုပ်သက်ရှိလာပါက ၂၁၀၀၀၊
ဒုတပ်ကြပ်တဦးလျှင် ၂၂၀၀၀ မှ လုပ်သက်ရလာပါက ၂၇၀၀၀၊
တပ်ကြပ် တဦးလျှင် ၂၈၀၀၀ မှ လုပ်သက်ရလာပါက ၃၃၀၀၀၊
တပ်ကြပ်ကြီး တဦးလျှင် ၃၄၀၀၀ မှ ၃၉၀၀၀၊
တပ်ခွဲတပ်ကြပ်ကြီးတဦးလျှင် ၄၀၀၀၀ မှ ၄၅၀၀၀၊
ဒုအရာခံ ဗိုလ်တဦးလျှင် ၄၆၀၀၀ မှ ၅၁၀၀၀၊
အရာခံဗိုလ် တဦးလျှင် ၅၂၀၀၀ မှ ၅၇၀၀၀၊
ဒုဗိုလ်တဦးလျှင် ၁ သိန်း၊ ဗိုလ်တဦးလျှင် ၁ သိန်း နှစ်သောင်း၊
သုံးပွင့်အဆင့်ရှိ ဗိုလ်ကြီးတဦးလျှင် ၁ သိန်း ၃ သောင်းမှ နှစ်နှစ်သက်တမ်းရှိပါက ၁ သိန်း ၄ သောင်း၊
ဗိုလ်မှူးတဦးလျှင် ၁ သိန်း ၅ သောင်းမှ ၁ သိန်း ၆ သောင်း၊
ဒုဗိုလ်မှူးကြီး တဦးလျှင် ၁ သိန်း ၇ သောင်းမှ ၁ သိန်း ၈ သောင်း၊
ဗိုလ်မှူးကြီး တဦးလျှင် ၁ သိန်း ၉ သောင်းမှ ၂ သိန်း၊
ဗိုလ်မှူးချုပ် တဦးလျှင် ၃ သိန်း၊ ဗိုလ်ချုပ် တဦးလျှင် ၄ သိန်း၊
ဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီးတဦးလျှင် ၆ သိန်း၊ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး တဦးလျှင် ကျပ် ၈ သိန်း၊
ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး တဦးလျှင် ကျပ် ၁၀ သိန်းနှင့်
ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးအတွက် ကျပ် ၁၂ သိန်း သတ်မှတ်ထားသည်။
အဆိုပါ လစာများကို ၁ ရက် ဧပြီလ ၂၀၀၆ ခုနှစ်မှ စပြီး ခံစားစေခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။
တနိုင်း ဒေသကွပ်ကဲမှု စစ်ဌာနချုပ်
လောက်ကိုင် ဒေသကွပ်ကဲမှု စစ်ဌာနချုပ်
မိုင်းဖြတ် ဒေသကွပ်ကဲမှု စစ်ဌာနချုပ်
လွိုင်ကော် ဒေသကွပ်ကဲမှု စစ်ဌာနချုပ်
ကလေး ဒေသကွပ်ကဲမှု စစ်ဌာနချုပ်
စစ်တွေ ဒေသကွပ်ကဲမှု စစ်ဌာနချုပ်
ပြည် ဒေသကွပ်ကဲမှု စစ်ဌာနချုပ်
အမှတ်(၁)စစ်ဆင်ရေးကွပ်ကဲမှုဌာနချုပ် - ကျောက်မဲ
အမှတ်(၂)စစ်ဆင်ရေးကွပ်ကဲမှုဌာနချုပ် - မိုင်းနောင်
အမှတ်(၃)စစ်ဆင်ရေးကွပ်ကဲမှုဌာနချုပ် - မိုးကောင်း
အမှတ်(၄)စစ်ဆင်ရေးကွပ်ကဲမှုဌာနချုပ် - ဖူးကြီး
အမှတ်(၅)စစ်ဆင်ရေးကွပ်ကဲမှုဌာနချုပ် - တောင်ကုတ်
အမှတ်(၆)စစ်ဆင်ရေးကွပ်ကဲမှုဌာနချုပ် - ပျဉ်းမနား (နေပြည်တော်)
အမှတ်(၇)စစ်ဆင်ရေးကွပ်ကဲမှုဌာနချုပ် - ဖယ်ခုံ
အမှတ်(၈)စစ်ဆင်ရေးကွပ်ကဲမှုဌာနချုပ် - ထားဝယ်
အမှတ်(၉)စစ်ဆင်ရေးကွပ်ကဲမှုဌာနချုပ် - ကျောက်တော်
အမှတ်(၁၀)စစ်ဆင်ရေးကွပ်ကဲမှုဌာနချုပ် - ကျီကုန်း (ကလေးဝ)
အမှတ်(၁၂)စစ်ဆင်ရေးကွပ်ကဲမှုဌာနချုပ် - ကော့ကရိတ်
အမှတ်(၁၃)စစ်ဆင်ရေးကွပ်ကဲမှုဌာနချုပ် - ဘုတ်ပြင်း
အမှတ်(၁၄)စစ်ဆင်ရေးကွပ်ကဲမှုဌာနချုပ် - မိုင်းဆတ်
အမှတ်(၁၅)စစ်ဆင်ရေးကွပ်ကဲမှုဌာနချုပ် - ဘူးသီးတောင်
အမှတ်(၁၆)စစ်ဆင်ရေးကွပ်ကဲမှုဌာနချုပ် - သိန်းနီ
အမှတ်(၁၇)စစ်ဆင်ရေးကွပ်ကဲမှုဌာနချုပ် - မိုင်းပန်
အမှတ်(၁၈)စစ်ဆင်ရေးကွပ်ကဲမှုဌာနချုပ် - မိုင်းဖြတ်
အမှတ်(၁၉)စစ်ဆင်ရေးကွပ်ကဲမှုဌာနချုပ် - ရေး
အမှတ်(၂၀)စစ်ဆင်ရေးကွပ်ကဲမှုဌာနချုပ် - ခမောက်ကြီး
အမှတ်(၂၁)စစ်ဆင်ရေးကွပ်ကဲမှုဌာနချုပ် - ဗန်းမော်
အမှတ်(၂၂)စစ်ဆင်ရေးကွပ်ကဲမှုဌာနချုပ် - ဟင်္သာတ